Vehivavy sy Miralenta · Marsa, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Vehivavy sy Miralenta · Marsa, 2017
Tantara mikasika ny Vehivavy sy Miralenta tamin'ny Marsa, 2017
Noho Ny Firoboroboan'ny Fandidiana Orona, Hanjavona Ve Ny Orona Armeniana?
Azia Afovoany sy Kaokazy31 Marsa 2017
«Raha ratsy ny toe-draharaha ara-toekarena, vitsy ny fandidiana; Raha tsara ny toe-draharaha ara-toekarena, marobe ny fandidiana»,
Famonoana Mpitati-baovao tao Meksika Miteraka Fahatafintohinana Manoloana ny Herisetra Atao Amin'ny Mpanangom-Baovao
Amerika Latina30 Marsa 2017
novonoin'izy ireo i Miroslava noho ny fitenenana, noho ny fandraisana ny vaovaom-bahoaka takian'ny fiarahamonina ary nampahatezitra ireo eo amin'ny fahefana, amin'ny endriny rehetra.
Andro Erantany Ho An'ny Vehivavy, Nidina an'Arabe i Amerika Latina
Amerika Latina26 Marsa 2017
Hetsika an'arabe sy fandraisana andraikitra avy amin'ireo mpikatroka maro no nandrandrain'i Amerika Latina tamin'ny Alarobia, taorian'ireo fanomezana toky avy amin'ireo vondrona sivily hoe hanatevina laharana ny fitokonana tsy hiasa amin'ny Andro Erantany natao ho an'ny Vehivavy.
Karaiba24 Marsa 2017
Mitsapa ny fetran'ny Lalànan'ny Heloka Antserasera somary vaovao ao amin'ny firenena ny mpampanoa lalàna Jamaikana amin'ny tranga anenjehana an'i Latoya Nugent, mpikatroka nanonona ampahibemaso ny anaran' ireo voalaza fa mpanao herisetra ara-nofo tao amin'ny media sosialy .
Goatemalà: Niharan'ny Fanafihana DDoS Ny Fampahalalam-baovao Namoaka Tatitra Momba Ny Fahafatesan'ireo Tovovavy
Amerika Latina23 Marsa 2017
Nanadihady tovovavy tsy ampy taona roa niangana tamin'ny loza nitranga tao amin'ny Trano Fialokalofana "Vierge de l'Assomption" ny vavadiham-baovao Nómada, ora vitsy taty aoriana, nisedra olana ny tranonkala.
Tafika Korintsana, Hetsika Mahery Vaika Manohitra Ny Herisetra Ara-nofo Ao Jamaika
Karaiba22 Marsa 2017
Tsy vonona ny hangina intsony ireo sisa niangan'ny fanararaotana ara-nofo sy ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy ao Jamaika.
Mitomany Zazavavy Am-polony Maty Tao amin'ny Akany Kilasimandry iray i Goatemalà
Amerika Latina21 Marsa 2017
"Aolan-dry zalahy ry zareo, ataony tsinontsinona ary rehefa manohitra, dia dorany velona. Ny fanjakan-dehilahy, ny fanavakavahana sy ny fanasokajiana no namono azy ireo ary isaky ny mipoaka ny masoandro, mamono azy ireo ny tsy firaharahiana."